Izindatshana zikaRonen Shnidman mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge URonen Shnidman
URonen ungumvangeli womkhiqizo ku IPipl, inkampani ezinikele ekwenzeni kube lula ukusebenzisa imininingwane yezenhlalo neyezobuchwepheshe ngabantu. Ungamlandela nezindaba zakamuva nezibuyekezo ezivela UPipl ku-Twitter.
Ungawakha Kanjani Uhlu Lokumaketha nge-imeyili olungcono usebenzisa imithombo yezokuxhumana
NgoMgqibelo, Januwari 25, 2020 NgoLwesine, Novemba 12, 2020 URonen Shnidman
Ukumaketha nge-imeyili bekulokhu kuyindlela edumile yokuthi abathengisi bafinyelele kumakhasimende angahle abe khona kusukela ekutholeni okwasakazeka okwasakazeka ngawo-1990. Noma kwenziwa amasu amasha njengemidiya yezokuxhumana, ukuthonya, nokumaketha okuqukethwe, i-imeyili isabhekwa njengeyona ephumelela kakhulu ngokusho kocwaningo lwabathengisi abangu-1,800 oluqhutshwa yi-Smart Insights ne-GetResponse. Kodwa-ke, lokho akusho ukuthi izindlela ezinhle kakhulu zokumaketha nge-imeyili azivelanga ngobuchwepheshe obusha. Ngenxa yezinkundla zokuxhumana sekukhona manje